ပုံပြင် – Page2– စာအုပ်မြို့တော်
ဧကရာဇ်မင်းတစ်ပါးဟာ သူ့ထံမှာ ရှိရှိသမျှ ပညာရှိတို့ကို ခေါ်ယူပြီး မေးတယ်။ “ကိစ္စတိုင်း၊ အခြေအနေတိုင်း၊ နေရာတိုင်း၊ အချိန်တိုင်း မှာ ဖြစ်နိုင်တဲ့ ပျော်ရွှင်မှုတိုင်း၊ ဝမ်းနည်းမှုတိုင်း၊ ကျရှုံးမှုတိုင်း၊ အောင်မြင်မှုတိုင်း အတွက် အသင့်တော်ဆုံး တစ်ခွန်းထဲသော ဆုံးမစကား ရှိသလား။” ပညာရှိတို့ အားလုံးအကျပ်ရိုက်သွားစဉ်မှာ ပညာရှိတစ်ယောက်ရဲ့ အနားက ပညာတော်သင် လူငယ် တစ်ယောက်က စာတစ်အိတ်ကို ဘုရင်ကြီးကို ထောင်ပြလို့ ပြောတယ်။”ဒီအကြံပြုစာက ကျွန်တော့်အဖေ မသေခင်ပေးသွားခဲ့တဲ့ စာပါ။ ကိစ္စတိုင်း၊ အခြေအနေတိုင်း၊ နေရာ တိုင်း၊ အချိန်တိုင်း မှာ တွေ့ကြုံလာတဲ့ အခက်အခဲတိုင်းမှာ ဒီစာဟာ လမ်းညွှန်မှု ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အောင်မြင်မှုတိုင်းကိုလည်း ဒီစာဟာ သုံးသပ်တတ်ပါတယ်။ ပြောရမယ်ဆိုရင် မင်းကြီး အတွက် အသင့်တော်ဆုံး အဖြေဟာ […]
Posted in: Featured, ပုံပြင်LeaveacommentMM Book City	 04/07/2018
တစ်ခါတုန်းက ဥာဏ်ပညာထက်မြက်ပြီး အတွေ့အကြုံ ကြွယ်ဝတဲ့ ပညာရှိကြီးတစ်ဦး ရှိပါတယ်… သူဟာ တစ်နေ့မှာတော့ အိမ်မီးလောင်ပြီး ပိုင်ဆိုင်သမျှ အရာရာကို ဆုံးရှုံးသွားလို့ စိတ်ပျက်အားလျော့စွာနဲ့ ၀မ်းနည်းပူဆွေးပြီး ငိုကြွေးနေတဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်ဆီ ရောက်လာပါတယ်။ . ပညာရှိကြီးက ထိုလူငယ်ကို ရေတစ်ဖန်ခွက် သွားယူခိုင်းပြီး ဆားတစ်ဆုပ်ကိုလဲ ယူလာခိုင်းပါတယ်.. ရေဖန်ခွက်ထဲကို ဆားတစ်ဆုပ် ထည့်လိုက်ပြီး ရောမွှေလိုက်ကာ ထိုလူငယ်ကို သောက်စေပါတယ်.. ပြီးတော့ ဘယ်လိုအရသာမျိုး ရှိသလဲလို့ မေးတဲ့အခါ ထိုလူငယ်က “ခါးတူးနေအောင် ငန်ပါတယ်”. လို့ပြန်ဖြေပါတယ်.. ဒီတော့ ပညာရှိကြီးက အသာပြုံးလိုက်ရင်း ထိုသူကို ဆားတစ်ဆုပ်ကို ယူလာခဲ့ပါလို့ ခိုင်းလိုက်ပြီး သူနဲ့အတူ လမ်းလျှောက်ဖို့ မြို့ပြင်ဘက်ကို ခေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ . မြို့အပြင်ဘက်ကို လမ်းလျှောက်လာကြရင်း အလွန် ကျယ်ပြောပြီး ကြည်လင်လှတဲ့ […]
Posted in: ပုံပြင်LeaveacommentMM Book City	 02/07/2018
တစ်ခါတုန်းက သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် တောကြီးမျက်မည်းထဲမှာ လှည့်လည်သွားလာနေတုန်း ဗြုန်းဆို ခပ်လှမ်းလှမ်း လာနေတဲ့ ၀က်ဝံကြီးတစ်ကောင်ကို တွေ့လိုက်ရသတဲ့။ တစ်ယောက်ဟာ ချက်ချင်းဆိုသလို ၀ုန်းကနဲထွက်ပြေးသွားပြီး နီးစပ်ရာအပင်ပေါ်ကို တွယ်တက်သွားတယ်။ နောက်တစ်ယောက်ကတော့ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘဲ ၀က်ဝံကြီးလာရာ လမ်းကြောင်းတည့်တည့်မှာ ထီးတည်းကြီး ကျန်နေခဲ့တာပေါ့။ကြံရာမရတဲ့အဆုံး သူဟာ မြေကြီးပေါ် လှဲချလိုက်ပြီး အသေကောင်လို ဟန်ဆောင်နေလိုက်တယ်။ ၀က်ဝံကြီးဟာ သူ့လမ်းကြောင်းအတိုင်း လျှောက်လာပြီး လမ်းပေါ်မှာလဲနေတဲ့ သူ့အနား ရောက်လာတဲ့အခါ ရပ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ သူ့ရဲ့မျက်နှာနားကပ်ပြီး အနံ့ခံလိုက်သတဲ့။အောက်ကလူကတော့ အသက်ရှူရပ်မတတ်ကို ကြောက်လန့်နေရှာတော့တာပေါ့။ အသက်မရှူတဲ့သူကို တွေ့တဲ့ ၀က်ဝံကြီးဟာ အသေကောင်လို့ထင်ပြီး အနားက ထွက်ခွာသွားတော့တယ်။ ၀က်ဝံကြီးပြန်သွားတဲ့အခါ အပင်ပေါ်ကလူဟာ အောက်ကိုပြန်ဆင်းလာတယ်။ ပြီးတော့ အသက်ထွက် မတတ် ကြောက်ရွံ့နေရှာတဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းကိုကြည့်ပြီး ခွက်ထိုးခွက်လန် ရယ်တော့တယ်။ ရယ်နေရင်းနဲ့ပဲ “၀က်ဝံကြီးက မင်းမျက်နှာနားကပ်ပြီး […]
Posted in: ပုံပြင်LeaveacommentMM Book City	 06/06/2018
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ရာပေါင်းများစွာ အကြာလောက်က အီတလီမြို့လေးတစ်မြို့မှာ ကုန်သည်တစ်ဦးဟာ သူ့ရဲ့ကုန်တွေဟာ သင်္ဘော ပျက်တဲ့အထဲပါသွားလို့ ငွေတိုးချေးစားတဲ့ လူတစ်ယောက်ထံမှာ အကြွေးအများကြီးတင်နေပါတယ်။ ကုန်သည်ကြီးငွေတိုးချေးထားတဲ့ အကြွေးရှင်ဟာ အသက်ကြီးကြီး ရုပ်ဆိုးတဲ့ အဖိုးကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သူက ကုန်သည်ရဲ့ သမီးချောလေးကို လက်ထပ်ချင်နေပါတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ ငွေတိုးချေးစားတဲ့ အဖိုးကြီးက ကုန်သည်ကြီးကို ကုန်သည်ကြီးရဲ့ သမီးဖြစ်သူနဲ့ သူ့ကိုလက်ထပ်ခွင့်ပြုရင် တင်နေသမျှ အကြွေးတွေအားလုံးကို လျှော်ပေးမယ်လို့ ကမ်းလှမ်းလာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သမီးဖြစ်သူကလည်း ချစ်သူရှိတာမို့ အဖိုးကြီးနဲ့ လက်မထပ်ချင်သလို ကုန်သည်ကြီးကလည်း သူ့သမီးကို အဖေအရွယ် အဖိုးကြီးနဲ့ လက်မထပ်စေချင်ပါဘူး။ဒါနဲ့ပဲ ငွေတိုးချေးစားသူက သမီးဖြစ်သူကို အရမ်းလက်ထပ် ချင်နေတော့ အလောင်းအစားတစ်ခုလုပ်မယ်လို့ ကုန်သည်ကြီးကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ အလောင်းအစားကတော့ ငွေတိုးချေးစားသူက အိတ်အလွတ်တစ်လုံးထဲကို ကျောက်စရစ်ခဲအမည်း တစ်လုံးနဲ့ အဖြူတစ်လုံးထည့်ထားမယ်။ ကောင်မလေးက အဲ့အိတ်ထဲက […]
Posted in: ပုံပြင်LeaveacommentMM Book City	 03/06/2018
” လူ့ အကျင့်စရိုက်အကြောင်းပြောပြတဲ့ ပုံပြင်လေး ၃ ပုဒ် “
၁. ဇင်နွယ်မြင့်က ကြက်ဥ မကြိုက်ပါဘူး ။ အဆောင်ကကြက်ဥဟင်းကျွေးတိုင်း နန်းယုဝေ ကို ပေးပစ်တယ် ။ အစပိုင်းတော့ နန်းယုဝေကကျေးဇူးတင်တယ် ။ နောက်ကြာလာတော့ အကျင့်ဖြစ်သွားရော အကျင့်ဖြစ်သွားတော့ ကြက်ဥဟင်းချက်တိုင်း နန်းယုဝေကို ပေးစားဖို့တာဝန်လိုဖြစ်သွားတယ် ။ တစ်နေ့ ကြက်ဥ ကြော်ဟင်းရတော့ ဇင်နွယ်မြင့်က ချမ်းမြေ့ကိုကျွေးပစ်လိုက်တယ်။ နန်းယုဝေကစိတ်တိုတယ် ။ သူမေ့နေတာ က ကြက်ဥကဇင်နွယ်မြင့်ရဲ့ကြက်ဥ သူဘယ်သူ့ကိုပေးပေး… ပေးပိုင်ခွင့်ရှိတယ် ။ ဒါပေမယ့် နန်းယုဝေက ဇင်နွယ်မြင့်ကိုစိတ်ကောက်ပြီးရန်ဖြစ်ကြတယ် ။ ပြီးတော့မခေါ်ကြတော့ဘူး ။ ၂. တစ်နေ့ရာသီဥတုကအရမ်းပူတယ် ။ ဒါနဲ့သူငယ်ချင်းတစ်စု လမ်းလျှောက်ရင်း အလည်ထွက်ကြတယ် ။ဒီလိုနဲ့ချောင်းစပ်ကို ရောက်သွားကြတယ် ။ ချောင်းဘေးမှာထိုင်ပြီး ရေထဲကို ခြေထောက်တွေစိမ်ကြတယ်.. ။ အဲ့အချိန်မှာ နန်းယုဝေရဲ့ဖိနပ်က […]
ဒေါသကြီးတတ်တဲ့ကျွန်တော်တစ်ယောက် ဒီပုံပြင်လေးကိုအမြဲဖတ်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမြဲဆုံးမလေ့ရှိတတ်ပါတယ်..။ ဖတ်တိုင်းရိုးမသွားတဲ့အရမ်းကောင်းတဲ့ပုံပြင်ကောင်းလေပါဘဲ… တစ်ခါတုန်းက အင်မတန်မှ စိတ်တိုစိတ်ဆတ်တဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက် ရှိသတဲ့ဗျာ။ တစ်နေ့ကျတော့ သူ့အဖေက သူ့ကို အိမ်ရိုက်သံတစ်ထုပ်ပေးပြီး ပြောပါတယ်။ “မင်း တစ်ခါ စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်တိုင်း သံတစ်ချောင်းတစ်ချောင်း နောက်ဖေးက ၀င်းထရံတိုင်မှာ သွားရိုက်ပါ” တဲ့။ ကောင်လေးကလည်း အဲဒီလိုပေးတဲ့နေ့ တစ်ရက်တည်းမှာတင် ၀င်းထရံတိုင်မှာ သံအချောင်း ၄၀ လောက် ရိုက်ပစ်လိုက်ပါသတဲ့။ အဲဒီလောက်အထိ ဒေါသကြီးတဲ့လူငယ်ပေါ့ဗျာ။ သူ့ခမျာ နေ့စဉ်ရက်ဆက် ဒေါသထွက်တိုင်း ၀င်းထရံတိုင်မှာ သံတွေ သွားသွားပြီးရိုက်ရတာ အတော်ကြီးကို များလာပါသတဲ့။ ဒါပေမယ့် အံ့သြစရာကောင်းတာက နေ့စဉ် စိတ်တိုတိုင်း သံတွေသွားရိုက်ရင်းနဲ့ ကောင်လေးဟာ သူ့စိတ်ကိုသူ ထိန်းနိုင်လာတာပါပဲ။ သံရိုက်တဲ့ အကြိမ်အရေအတွက်ကလည်း တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ နည်းနည်းလာပါသတဲ့။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကောင်လေးက စိတ်တိုတိုင်း ၀င်းထရံမှာ […]
Posted in: ပုံပြင်LeaveacommentMM Book City	 24/05/2018